Hawaii steeti kachasị njọ na US maka ụlọ enyi na enyi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii steeti kachasị njọ na US maka ụlọ enyi na enyi
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọnụ ọgụgụ ihe ndị enyi nwere anụ ụlọ dị nwere ike ịdịgasị iche nke ukwuu site n'otu ebe ruo ebe, na-eme ka akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ nwee ike ịnweta ndị nwere anụ ụlọ karịa ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ ihe ndị na-amasị anụ ụlọ na-agbanwe nke ukwuu site na steeti ruo na steeti.
Illinois, Mississippi na New York bụ steeti kacha nwee enyi enyi.
Hawaii, Alaska na West Virginia bụ steeti US kacha nwee enyi enyi.
67% nke ezinụlọ US (ihe dị ka nde ezinụlọ 85) nwere anụ ụlọ, yana nde nde 43 nwere ndị nwe ụlọ. Yabụ, gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga na enyi gị iwe ọkụ?
N'iburu nke a n'uche, ndị ọkachamara na -ahụ maka njem chọrọ ịchọpụta steeti, obodo na obodo nwere oke ụlọ dị maka ịgbazinye na -anabatakwa anụ ụlọ.
Ilele n'elu iri ise mmadụ kacha biri US obodo, ndị ọkachamara dekọtara oke nke ihe ndị nwere ike ịgbazite na -anabatakwa anụ ụlọ. Tụkwasị na nke a, anyị achọpụtala pasent nke mgbazinye dị na steeti ọ bụla nke ga -anabata onye nwe ụlọ nwere anụ ụlọ, na -ekpughe ebe kacha mma na mba maka ndị nwe anụ ụlọ ibi.
Illinois bụ steeti kachasị mma na mba maka ndị nwere anụ ụlọ na -achọ ịgbazite, yana 59.87% nke ihe onwunwe na -anabata anụ ụlọ. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwe anụ ụlọ na -achọ ịkwaga mpaghara ọhụrụ nke mba ahụ, Illinois nwere ike bụrụ nzọ dị mma maka gị!
Ọnọdụ nke abụọ kacha mma maka ịgbazinye anụ ụlọ bụ Mississippi, yana 52.28% nke ohere dịịrị ndị nwe anụ ụlọ. Nke a na-eme Mississippi ka enyi kacha nwee anụrị nke steeti Ndịda niile, yana nnukwu ebe ndị nwe anụ ụlọ ga-ebi.
New York bụ steeti nke atọ kacha mma na mba maka ịgbazinye anụ ụlọ, yana 47.89% nke ihe onwunwe na-enye ndị nwe ụlọ ohere iweta anụ ụlọ ha. Pasent a dị elu na -eme New York steeti kachasị mma na ụsọ Oké Osimiri East maka iso anụ ụlọ gị biri.
Top 10 steeti kachasị mma maka mgbazinye enyi na enyi
n'usoro State Enyi Enyi Na -ahapụ Mkpokọta Ahapụ % Enyi na enyi